android အတွက် Battery Saver2APK | Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဘက်ထရီချွေတာ 2
Battery Saver2& ဘက်ထရီကိုသိမ်းပါ။ “ အလွန်လွယ်ကူသော” ဘက်ထရီချွေတာသုံးစွဲသည့်အပလီကေးရှင်းဖြစ်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ သင်၏စုဆောင်းမှုစွမ်းရည်ကို Cool droid ဇာတ်ကောင်များ (Creative Commons 3.0, Google လက်အောက်တွင်) ဖြင့်သင်၏ဘက်ထရီဆရာဝန်ဖြစ်လာပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းသည်သုံးစွဲသူများဘက်ထရီသက်တမ်းကို (အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအလွန်လွယ်ကူစွာဖြင့်) သက်သာစေပြီး one-touch memory cleaner ဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာသွားနိုင်သည်။ ဒီ app ကအလွန်အမင်းလွယ်ကူသည်။ 100% အခမဲ့ဖြစ်သည်။ 2,000,000 ကိုကျော်ဒေါင်းလုပ် !!!“ လူတိုင်းအသုံးပြုရမယ့် app ဟာကျေနပ်စရာပါ။ ” - AskyourAndroid.com
“ ကြိုးစားသင့်တာသေချာပါတယ်” - AndroidHeadlines.com
“ ဒီလမ်းကြောင်းကပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ ” - Apps400.com
“ အသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ ” - Apps4review.com
8 Toolbox Mix App မှ 1! - Memory Cleaner (ie Task Killer / Optimizer)၊ သက်တမ်းအညွှန်း၊ Deep Sleep Mode, ချိန်ညှိချက်များ Optimizer, Charge Alert၊ Status Bar သတိပေးချက်၊ ဘက်ထရီဝစ်ဂျက်နှင့် App Uninstaller ။ 8 ၏အင်္ဂါရပ်များသို့သော်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်။ ဤအက်ပ် / ဝစ်ဂျက်ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ၊
* အင်္ဂါရပ်များ *
★ —1 Memory Cleaner (ieTask Killer) - ★
Mem Memory up သန့်ရှင်းပြီးစွမ်းအင်ကိုချွေတာရန်အတွက်အလွန်လွယ်ကူသော“ ထိတွေ့မှု” ခလုတ်ဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုသေစေသည်။
before မတိုင်မှီ / အပြီးများအတွက်မှတ်ဉာဏ်သန့်ရှင်းသောအဆင့်ကိုဖော်ပြသည်။ သင့်ဖုန်းကိုယိုစီးမှုမှကာကွယ်ပါ။
★ —2 ဘက်ထရီသက်တမ်း - ★
percent ဘက်ထရီသက်တမ်းရာခိုင်နှုန်း (%) ရှိပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းအားလုံးကိုအေးမြသော Droid အိုင်ကွန်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။
Talk Talktime၊ Game, Standby၊ AudioPlayback, MoviePlayback, WebSurfing နှင့် Reading အတွက်ကျန်ရှိသော / ကန့်သတ်ထားသောအချိန်ကိုဖော်ပြသည်။
★ —3 Deep Sleep Mode - ★
phone သင့်ဖုန်းကိုအသုံးမပြုစဉ် 5min / 30min / ဘယ်တော့မှမဆိုဒေတာစည်းညှိခြင်းကိုသင်အလိုရှိသောအချိန်အတိုင်းလျှော့ချရန်သင်၏“ Sleep Mode” ကိုသတ်မှတ်ပါ။ လွယ်ကူသောသင်ခန်းစာဖြင့် Deep Sleep Mode ၏မာစတာတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။
★ —4 Settings Optimizer- ★
power ပါဝါပိုကောင်းအောင် / သိမ်းဆည်းရန် Wi-Fi၊ Bluetooth၊ အလိုအလျောက်စည်းညှိအချက်အလက်များ၊ အလိုအလျောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ GPS၊ မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုသတ်မှတ်ပါ။
★ —5 နှိုးစက်အကြောင်းကြားစာ-★
the ပါဝါအား 100% / 70% / 50% / 30% / 20% ထက်နိမ့်သောအားဖြင့်နိုးကြားလျှင်သတိပေးပါလိမ့်မည်။ (ရနိုင် / ပိတ်)
★ —6 Status Bar အသိပေးချက်— ★
✓ယခုသင်၏ရာခိုင်နှုန်းကိုသင်၏ဖုန်းအခြေအနေဘားတွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ (ရနိုင် / ပိတ်)
-pull-down notification bar မှတဆင့်ဘက်ထရီချွေတာခြင်း၏ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးပါ
★ —7 ဘက်ထရီ / မှတ်ဉာဏ် Optimizer Widget- ★
N4* 1 ဘက်ထရီ / မှတ်ဉာဏ် Optimizer ဝစ်ဂျက်သည်သင်၏မှတ်ဉာဏ်သန့်ရှင်းမှု / ဘက်ထရီအဆင့်ကိုစစ်ဆေးရန်!
one Battery Saver အက်ပလီကေးရှင်းကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်
★ —8 လျှောက်လွှာ Uninstaller- ★
Android စက်ရုပ်သည်ဂူဂဲလ်မှဖန်တီးပြီးမျှဝေသောအလုပ်မှထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် Creative Commons 3.0 Attribution လိုင်စင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Ver.1.4.0 - ဗိုလ်မှူး UI Update ကို
8.70 ကို MB